Kunzwisisa Kero Kutarisa, Kumisikidza, uye Kuendesa Verification APIs | Martech Zone
Ndisati ndashanda online, ndakashanda kwemakore gumi mupepanhau uye ndakananga maindasitiri ema mail. Nekuti kutumira kana kutumira kutaurirana kwekushambadza kwaidhura, isu taive takangwarira zvakanyanya nezve hutsanana hwe data. Isu taida chidimbu chimwe chete pamhuri, kwete zvakare. Kana isu tikaendesa boka rezvakangofanana tsamba zvidimbu kukero, zvakakonzera akawanda nyaya:
Mutengi akashungurudzika uyo angazosarudza-kunze kwekushambadzira kwekutaurirana.
Kuwedzera mari yebhadharo kana kuendesa pamwe nemari yekuwedzera yekudhinda.
Kazhinji, zvaitoda kuti tidzorere mushambadzi kana vauya nemadhindindi ekuendesa.
Pamusoro pezvo, kero dzaive dzisina kukwana kana zvisirizvo dzaida kudzoreredzwa uye zvisina basa mari yekuendesa zvakare.
Anenge makumi maviri kubva muzana emakero akapinda muInternet ane zvikanganiso - zviperengo zvikanganiso, nhamba dzedzimba dzisina kukodzera, makodhi epositi asiri iwo, mafomati ekumisikidza asingaenderane nemitemo yepositi yenyika. Izvi zvinogona kukonzeresa kunonoka kana kusatakurika kutumira, kunetseka kukuru uye kunodhura kumakambani anoita bhizinesi mudzimba nekuyambuka miganhu.
adhiresi ongororo hazvisi nyore sezvazvinogona kurira, hazvo. Kunze kwezviperengo, svondo rega rega kune maateresi matsva anowedzerwa kudhatabhesi renyika remakero anotakurika munyika. Kune mamwewo makero anoshandurwa, sezvo zvivakwa zvinoshanduka kubva pakutengesa kuenda pekugara, kana mhuri imwechete kuenda kudzimba dzemhuri dzakawanda, munda wekurima unogoverwa munzvimbo dzenharaunda, kana nharaunda dzese dzinovandudzwa.
Kero Yekuongorora Maitiro
Kero yakapatsanurwa - saka nhamba yemumba, kero, zvipfupiso, zvisirizvo-zviperengo, nezvimwe zvakaparadzaniswa zvine musoro.
Kero yacho yakaenzana - yakamboparadzaniswa, kero yacho inozogadzirisirwa muyero. Izvi zvakakosha nekuti 123 Main St. uye 123 Main Street ichave yakamisikidzwa ku 123 Main St uye duplicate inogona kuenzaniswa uye kubviswa.
Kero yacho yakasimbiswa - iyo yakamisikidzwa kero inozoenderana neyepasi rose dhatabhesi kuti uone kuti iriko chaizvo.
Kero yacho inosimbiswa - haasi ese ma kero anonunurwa kunyangwe aripo. Iyi inyaya imwe yekuti masevhisi akaita seGoogle Mepu ane… anokupa kero inoshanda asi panogona kunge pasina kana chimiro ipapo chekuendesa.
Chii chinonzi Kero Kugonesesa?
Kero yekusimbisa (inozivikanwawo sekusimbiswa kwekero) chiitiko chinoona kuti mumigwagwa nepositi kero zviripo. Kero inogona kusimbiswa mune imwe yenzira mbiri: kumberi, kana mushandisi achitsvaga kero isiri iyo kana kukwana, kana nekuchenesa, kupatsanura, kuenzanisa uye kumisikidza dhata mune dhatabhesi inopesana nereferensi yepositi dhata.
Chii chinonzi kero kusimbiswa? Mabhenefiti uye kesi dzekushandisa dzakatsanangurwa
Kero Verification vs Kero Validation (ISO9001 Tsananguro)
Haasi ese masevhisi masevhisi akafanana, hazvo. Mazhinji kero yekuongorora masevhisi anoshandisa nzira dzemitemo kuenzanisa dhatabhesi. Mune mamwe mazwi, sevhisi inogona kutaura kuti mukati me zip 98765 kuti pane Main Street uye inotanga pakero 1 uye inopera pa150. Nekuda kweizvozvo, 123 Main St iri inoshanda mhuri zvichienderana nepfungwa, asi kwete hazvo a akafanirwa kero uko chimwe chinhu chingaendeswa.
Iyi zvakare inyaya ine masevhisi anopa latitude uye longitude ine chaiyo kero. Mazhinji eaya masisitimu anoshandisa masvomhu kupatsanura zvine hungwaru kero pamubato uye kudzosa computed latitude uye longitude. Sevatengesi, maresitorendi, uye masevhisi ekushandisa anoshandisa lat / refu kuendesa kwenyama, izvo zvinogona kukonzera tani yezvinhu. Mutyairi anogona kunge ari pakati nepasi uye haakwanise kukuwana iwe zvichibva pane fungidziro yedata.
Kutora Kero Dhata
Ndiri kushanda pamwe nekuendesa sevhisi izvozvi apo vatengi vanopinda avo pachavo kero ruzivo, iyo kambani inotengesa kunze kwenyika kuendesa zuva nezuva, uye wozovafambisa vachishandisa rakasiyana sevhisi. Mazuva ese, kune akawanda emareti asingatendeseki ayo anofanirwa kugadziriswa mukati meiyo system. Uku kutambisa nguva kupihwa kune masystem anokwanisa kubata izvi.
Sezvo isu tiri kugadzirisa iyo system, isu tiri kushanda kuti timire uye tione kero pakapinda. Iyo ndiyo nzira yakanakisa yekuona yako data kuchena. Paridzira yakatarwa, yakasimbiswa dhirivhari kero kune mutengi pakupinda uye ita kuti vabvume kuti ndizvo chaizvo.
Kune akatiwandei zviyero izvo iwe zvaunoda kuwona kuti izvo mapuratifomu anoshandisa:
CASS Certification (United States) - Iyo Coding Akarurama Sisitimu Yekutsigira (CASS) inogonesa United States Postal Service (USPS) kuongorora kururama kwesoftware inogadzirisa uye inowirirana nekero dzemugwagwa. CASS certification inopihwa kune vese vatumira mameseji, mahofisi ebasa, uye vatengesi ve software vangade iyo USPS kuti iongorore mhando yeayo kero-inoenderana nesoftware uye nekuvandudza kunyatso kweZIP + 4 yavo, nzira yekutakura, uye manhamba mashanu ekunyora.
SERP Certification (Canada) - Software Kuongorora uye Kuziva Chirongwa chitupa positi chakapihwa neCanada Post. Chinangwa chayo ndechekuongorora kugona kweimwe software kusimbisa uye kugadzirisa tsamba dzekutumira.
Kero Verification APIs
Sezvandambotaura pamusoro apa, haasi ese masevhisi ekuvimbisa kero akagadzirwa akaenzana - saka iwe uchazoda kunyatso tarisa kune chero nyaya dzinogona kumuka Kuchengetedza mashoma masendi pamubhadharo wakasununguka kana wakachipa kunogona kukukonzera madhora muzvinhu zviri pasi zvekutakura.
Melissa parizvino ari kupa yemahara kero yekusimbisa masevhisi kwemwedzi mitanhatu (anosvika 100K marekodhi pamwedzi) kunokodzera masangano akakosha anoshanda kutsigira nharaunda panguva ye COVID-19 denda.
Melissa COVID-19 Mipiro Yebasa
Heano akanyanya kufarirwa APIs ekugadziriswa kwekero. Iwe unozoona kuti chimwe chikuva chakakurumbira hachina kutaurwa - Google Mepu API. Izvi zvinodaro nekuti haisi kero yekusimbisa kero, iri geocoding service. Kunyangwe ichimisikidza uye ichidzosera latitude uye kureba, hazvireve kuti mhinduro yacho inogona kuunzwa, kero yepanyama.
Easypost - US kero yekuongorora uye inokurumidza-kukura epasirese kero kuongorora.
Experian - kero yekusimbisa yenyika dzinopfuura mazana maviri nemakumi mana nenharaunda kumatunhu epasirese.
rumbidzo - Iine data kubva kunopfuura nyika mazana maviri nemakumi mana pasirese, Lob inoongorora ese ari maviri epamba kero uye epasi rese.
log in - kero yekuongorora mhinduro iyo inotora, kuenzanisa, kuomesa, kuongorora, kuchenesa, uye fomati yedhata yedatha yenyika dzinopfuura makumi maviri nemashanu.
Melissa - inoongorora kero dzenyika mazana maviri nemakumi mana + nenharaunda padanho rekupinda uye mune batch kuti ive nechokwadi chete chechokwadi chekubhadhara uye kero dzekutumira dzinotorwa uye dzinoshandiswa mune ako masisitimu.
SmartSoft DQ - inopa yakazvimirira zvigadzirwa, kero yekusimbisa APIs uye maturusi emidziyo ayo anozobatana nyore nyore mune ako aripo-anotarisana nekero zvinoshandiswa.
SmartyStreets - Ine US kero kero API, Zip Code API, Autocomplete API, uye zvimwe zvishandiso kubatanidza mune ako mashandisiro.
TomTom - TomTom Online Kutsvaga's geocoding chikumbiro ficha inopa iri nyore-kushandisa mhinduro yekuchenesa kero data uye kuvaka dhatabhesi yenzvimbo dzine geocoded.
Tags: kero apikero datakero geocodingkugadzirisa kerokugadzirisa kerokusimbiswa kwekerokuongorora keroeasypostsvclobloqateMelissa dhatasmartsoft dqTomtom